Ụzọ nyefee data si ios ka LG
Nkebi nke 1: Issues banyere ibuga data si iOS ngwaọrụ LG igwe
LG anọwo nnọọ na-arụsi ọrụ ike na nso nso na ha gam akporo igwe na ọ bụ nanị atụmatụ ndị ahụ ọhụrụ atụmatụ kamakwa na-anya isi a sleek na ebughibu anya. Na-agbanwe agbanwe ahịa na ọnọdụ na nnofega nke onye ọrụ mmasị na gam akporo igwe, LG nwekwara nweela a kama ibu ọrụ isi. Ọ bụrụ na ị na-otu n'ime ọtụtụ ndị na-adịbeghị anya gbanwere na LG ngwaọrụ mgbe eji ihe iOS ngwaọrụ fọrọ nke nta ka a ndụ oge, anyị nwetara zuru okè ndu inyere gị aka site na data ebufe usoro nri ebe a.
Nke akụkụ a nke mgbanwe site iOS ka LG ga n'ezie eme ka ndụ gị nhụsianya. M na-adịghị ekwubigaghị okwu ókè, ozugbo ị ka ụkwụ na obi n'ókèala a frasi, ị ga-aka mbupụ / ibubata faịlụ na onye ọ bụla na ọ bụla nzọụkwụ maka onye ọ bụla na ihe ọ bụla ụdị data ntụgharị kọntaktị, foto, ozi, music wdg N'ihi na ụfọdụ n'ime ndị a, ị ga-achọrọ iji ma gị google na iCloud akaụntụ, n'ihi na ụfọdụ ị ga-aka idetuo / mado stof site na otu ngwaọrụ gị laptọọpụ wee si laptọọpụ ka ngwaọrụ ọzọ. N'ihi ihe ụfọdụ, ị ga-eme ka ojiji nke ọzọ ngwa. Na okwu ndị dị mfe, ma ọ bụrụ na ị jide gị sanity hụrụ n'anya, ị na-agaghị ọbụna n'ime a ụkwụ nke usoro a.
Part 2. Easy ngwọta: 1 Pịa nyefee data si iPhone ka LG
Nnukwu mwepu nke usoro kwuru na mbụ bụ na mgbe n'ịrụzu onye na-enyefe nwere ike ịbụ mfe, na-arụ ha niile, otu otu n'ezie amalite-ewe ya ịkpatara gị. E nweghị nnọọ n'ụzọ na ị nwere ike ikpokọta niile nke n'elu kwuru banyere Filiks n'ime otu onye na-ebu ya, na dị nnọọ ike mere na ya. Nke a bụ ebe Wondershare MobileTrans nzọụkwụ ke.
Wondershare MobileTrans Bụ a software dị maka ma Windows na Mac ọrụ nke na-eme data shifting usoro dị mfe. Ọ na-agwakọta niile data ebufe eme ma na-eburu ha n'onwe ya na-ọ chọrọ n'ihi na ị bụ na-pịa bọtịnụ ma ọ bụ abụọ! A na-eju software nwere ike ibudata site http://www.wondershare.com/phone-transfer/. Ọ nwere free ikpe mbipute nakwa dị ka a adịchaghị ụgwọ mbipute na a mere $ 19.95 nke nwere niile edinam juru n'ọnụ n'ime. Ọ bụghị nanị na-ahapụ gị nyefee kọntaktị gị, kalịnda, foto na music ma na-ahapụ ị na-akpali gị ngwa ọdịnala na oku na ndekọ n'ofe ngwaọrụ N'ihi ya na iwepu mkpa nke iji dị iche iche ọzọ ngwa.
Wondershare MobileTrans Ga-eji na-ebufe data site na ekwentị gaa na ekwentị ọzọ dị ka ozi, kọntaktị, oku na ndekọ, kalenda, photos, music, video na ngwa. Ọzọkwa ị pụrụ ndabere gị iPhone na chekwaa data na PC gị na, ka ihe atụ, ma weghachi mgbe na ị chọrọ. Ihu ọma gị niile dị mkpa data nwere ike zigara ngwa ngwa si ​​a ekwentị gaa na ekwentị ọzọ.
Ugbu a, na anyị maara na ihe na-eme Wondershare MobileTrans nwere na-enye, ka anyị hụ ke edinam. Na-amalite data ebufe usoro si gị iOS gị LG ngwaọrụ, eso ndị a:
1. Download Wondershare MobileTrans si http://www.wondershare.com/phone-transfer/ na wụnye ya na gị na laptọọpụ / kọmputa. Chere maka echichi mezue, nke a na-adịghị ewe oge. Na-agba ọsọ ya otu ugboro echichi zuru ezu.
2. Jikọọ ma nke ngwaọrụ (iOS na LG) gị laptọọpụ / kọmputa site na eriri USB. MobileTrans Ga-ewe oge ịchọpụta na wụnye ha na nwoke ọkwọ ụgbọala.
3. Ozugbo ngwaọrụ e ahụrụ, ị ga-enweta a window featuring ma ndị isi na-aga ngwaọrụ na ekpe na aka nri n'akụkụ nke ihuenyo karị. The menu ke center na-egosi na ihe pụtara na a ga-agafere si iOS ngwaọrụ ka LG ekwentị. Niile ma ọ bụ ụfọdụ n'ime ndị a nhọrọ nwere ike họrọ ka kwa gị oke site n'inyocha ha kwekọrọ ekwekọ ego igbe.
4. Mgbe ahọpụta gị chọrọ nhọrọ, họrọ "Malite Copy" na-amalite data ebufe usoro. Jide n'aka na ma nke ngwaọrụ jikọọ na laptọọpụ / kọmputa n'ihu na ịpị "Malite Copy".
5. Ị ga-achọpụta na ọdịdị nke a na windo na a na-enwe ọganihu mmanya n'ụlọ n'elu na-egosipụta ọganihu nke na-ebufe usoro na pasent. N'okpuru ya a ndepụta na-egosi ọnọdụ nke onye ọ bụla data ihe ka-depụtaghachiri iche iche. Ndị ihe nke e kpamkpam kpọfere ga-a "Ịga nke Ọma" ọnọdụ dere megide ha.
6. Chere maka ọganihu mmanya iru 100% ma jide n'aka na onye ọ bụla nke ngwaọrụ Nwela detached n'oge usoro dị ka ọ nwere ike ịkpata ọnwụ ma ọ bụ ire ure nke data. Mgbe ọrụ mmanya na-egosi ẹkụre data ebufe usoro, ị nwere ike n'enweghị wepu ma ngwaọrụ gị si gị na laptọọpụ / kọmputa.
7. Gị ọhụrụ LG ekwentị niile bụ set na-eji na ga nwere niile data nke gị aga na ekwentị na ya ugbu a. Ọ bụ ezie na ị pụrụ chọrọ nwere oyiri nke niile iPhone data echekwa na a ndabere faịlụ na gị laptọọpụ / kọmputa, nke nwekwara ike mere iji Wondershare MobileTrans.
Part 3. Nghoputa: Kedu LG ngwaọrụ ị na-eji?
1. LG Optimus gafere 2
3. LG Mmụọ
7. LG G3 mkpịsị
10. LG G3 agbọghọbịa
Olee otú Naghachi ehichapụ Facebook ozi Ozi na iOS
> Resource> iOS> otú nyefee Data si iOS Devices ka LG ekwentị mkpanaaka na